सेलेब्रिटीसँग कुकुर संवाद : भुवनले गायब पारे अनमोलका कुकुर - Naya Patrika
सेलेब्रिटीसँग कुकुर संवाद : भुवनले गायब पारे अनमोलका कुकुर
नयाँ पत्रिका | बैशाख ०६, २०७४
राजेशले पाल्नै छाडे, साम्राज्ञीलाई नभई हुन्न
कुकर घरको सुरक्षागार्ड मात्रै होइन, प्रिय साथी पनि हो । त्यसैले त आजकाल घरकै सदस्यका रूपमा स्थान दिएर कुकुर पाल्ने गरिन्छ । आफैँले तालिम दिएर बुझ्झकी बनाएको कुकुरसँग खेल्दै समय बिताउन खुब मज्जा हुन्छ भन्छन्, पाल्नेहरू । तर, घरको रखबारमा खटिने कुकुर कोही नयाँ मान्छे आउँदा कराउने, फोहोर गरिरहने भएकाले कतिपयले भने पाल्न झन्झट पनि मान्छन् । नेपालमा अभिनेता-अभिनेत्रीलाई चाहिँ कुकुर पाल्न कस्तो लाग्छ ? कसले कस्ता कुकुर पालेका छन्, कसले पाल्दैनन् ? नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीले चर्चित सेलेब्रिटीसँग सोधेका छन्:
पछिल्लो पुस्ताका चलेका अभिनेता अनमोल केसी सानैदेखि कुकुरप्रेमी थिए । बाबु भुवन केसीले उनको खुसीका लागि पनि घरमा कुकुर ल्याइदिए ।
एकैपटक ६ वटा कुकुर ल्याइदिएको स्मरण गर्छन्, अनमोल । तर, पढ्ने सिलसिलामा उनले तीन कुकुर छाडेर होस्टेल बस्नुपर्यो । केही समयपछि घर आउँदा त कुकुर नै देखेनन् ।
‘म होस्टेल बस्दा बुबाले सबै कुकुर साथीभाइलाई गिफ्ट दिनुभएछ,’ अनमोलले सुनाए, ‘होस्टेल जानुअघि गोल्डेन रेट्रिभर जातको कुकुरलाई सधैँ अँगालो मारेर बस्थेँ । आफ्नो खाजा पनि उसैलाई दिन्थेँ । राति पनि मैसँग सुत्थ्यो।’
तर, होस्टेलबाट फर्किंदा घरमा कुकुर नदेखेपछि उनलाई तनाव भयो । ‘खै त कुकुर ?’ उनले बाबुलाई सोधेछन् ।
जब सबै कुकुर साथीभाइलाई दिएको भुवनले सुनाए तब अनमोल निराश भए । ‘कुकुरलाई केही हुँदा म रुने कराउने गर्थें,’ उनले सम्झिए, ‘जर्मन सेफर्ड, गोल्डेन रेट्रिभर, ल्याभेन्डर, जापनिज स्पिट्सलगायत कुकुर थिए ।’
त्यसो त भुवन केसीलाई पनि कुकुर औधी मन पर्छ । उनले अनमोलको रहरले मात्रै कुकुर किनेका थिएनन् । आफूलाई पनि कुकुरको हुल नै पाल्ने इच्छा थियो । उनले एकैचोटी ६ वटा कुकुर ल्याएर रेखदेखका लागि एक कर्मचारी पनि राखे । तर, केही वर्षमै एउटा कुकुर मर्यो । यसपछि भने उनलाई दुःख लाग्यो र बाँकी पाँचवटा कुकुर साथीभाइलाई दिए ।
‘कर्मचारीले हेरेर मात्रै पनि नहुने, समय दिनै सकिएन । एक–आपसमा झगडा गरेर मर्लान् भन्ने डर भयो,’ उनले भने, ‘यसैकारण सबै कुकुर अरूलाई जिम्मा लगाए“ ।’
अभिनेता राजेश हमालको घरमा अहिले कुकुर छैन । केही पहिले उनले पनि कुकुर पालेका थिए । किन पाल्न छाडे त उनले ? ‘सुटिङका क्रममा बाहिर जाँदा कुकुरको रेखदेख गर्नै सम्भव भएन, त्यसैले पाल्न छाडेँ,’ राजेशले सुनाए । कुकुरलाई धेरै रेखदेख चाहिने तर, आफ्नो समय नपुग्ने भएकाले कुकुर पाल्न छाडेको उनको भनाइ छ । तर, उनलाई कुकुर मन नपर्ने भने होइन ।
अभिनेत्री केकी अधिकारी पनि कुकुरलाई करिश्माभन्दा कम मायाँ गर्दिनन् । उनको फेसबुकमा ‘आई मिस यु माई ह्याप्पी’ लेखेर कुकुर बोकेको तस्बिर पोस्ट गरेको देख्न सकिन्छ । तर, केही समयदेखि उनीसँग त्यो प्रिय कुकुर छैन उनी त्यसलाई ‘मिस्ड’ गरिरहेकी छिन् । ‘दुई वर्षको जापनिज स्पिट्स घरबाटै हरायो, ऊ हराएपछिको पीडाले यति धेरै सताएको छ कि अर्को कुकुर ल्याउन सकेकी छैन,’ केकीले सुनाइन्, ‘ह्याप्पी मेरो मामाको छोराले गिफ्ट दिएको कुकुर थियो ।’ अब केही समयपछि घरमा नयाँ कुकुर भित्राउने योजनामा केकी छिन् । उनलाई कुकुर घरकै सदस्यका रूपमा पाल्न मन लाग्छ ।
अभिनेत्री तथा मोडल माला लिम्बू आफ्नो कुकुरसँग टाढा हुँदा खुसी मान्दिनन् । उनले कुकुरको नाम राखेकी छिन्, मार्सी । बारबाहिर निस्किँदा मार्सी पुच्छर हल्लाउँदै गेटसम्म छाड्न आउँछ र घर फर्किंदा पनि खुसी हुँदै उफ्रिन्छ । मार्सीसँग आफ्नो सम्बन्ध प्रगाढ रहेको पुष्टि मालाले इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरिरहेकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले मार्सीका अनेक तस्बिर राखिरहेकी हुन्छिन् ।
सन् २०१६ मा किनेको जापनिज स्पिट्ज जातको मार्सीसँग मात्रै होइन साथीभाइ र इष्टमित्रकहाँ पालिएका पप्पीसँग पनि तस्बिर खिच्न रुचाउँछिन् माला ।
अभिनेत्री पूजा शर्माको घरमा त तीनवटा कुकुर छन् । ती कुकुर साना हुँदा आफूसँगै सुत्ने गरेको पूजाले बताइन् । ‘सानो छँदा बल्लु र रोमियो मसँगै सुत्थे, तर अहिले जवान भएर होला मान्दैनन्,’ पूजाले हाँस्दै भनिन्, ‘घरमा कुकुर नभएर सुनसान लाग्छ ।’ आफूलाई प्रेम गर्दै कुकुरहरूले पछ्याउँदा पूजा निकै खुसी हुन्छिन् । भ्याएसम्म कुकुरसँग खेल्न र सँगै घुम्न निकै आनन्द लाग्ने उनले सुनाइन् ।
अभिनेत्री रेखा थापालाई भने कुकुर मन पर्दैन । ‘आई डन्ट लाइक डग,’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिइन् । कोही पाहुना घरमा आउँदा कराउने र दिग्दार बनाउने भएकाले कुकुर मन नपरेको उनले सुनाइन् । ‘कुकुरको डर देखाएर मान्छेलाई घरमै आउन बन्देज गरेजस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, त्यसैले पाल्न मन लाग्दैन,’ रेखाले स्पष्ट पारिन् ।
अभिनेता सरोज खनाल भने कुकुर पाल्न रुचाउँदैनन् । घरमा फोहोर गर्ने र पाहुनाले डर मान्ने भएकाले उनी रुचाउँदैनन् । ‘जब घरमा कुकुर भुक्छ, आफन्त र साथीभाइहरू आउन डराउनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘कुकुरको डरले पाउनाहरू घरमा आउन नरोकियून् भनेर पनि पाल्दिनँ ।’
अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेललाई भने कुकुर खुब मन पर्छ । तर, घरमा पालेकी छैनन् । घरमा कुकुर नभए पनि टोलका कुकुरप्रति उनको प्रेम दर्सिन्छ । ती कुकुरलाई सधैँजसो खानेकुरा दिन्छिन् । त्यसैले त हरेकदिन उनको घरको गेटमा कुकुरको भीड लाग्छ । ‘म टोलका कुकुरलाई दैनिकजसो केही न केही खुवाउने गर्छु, तीनको खुसी देख्दा मन नै शान्त हुन्छ,’ सञ्चिताले भनिन् ।
पलाँस चलचित्रका अभिनेता आयुव केसी पनि कुकुरप्रेमी छन् । एउटा कुकुर पालेका उनले नाम दिएका छन् ‘पुगु’ । पुगुलाई आफूसँगै सुताउनेदेखि घरबाहिर निस्किँदा सँगै लिएर जाने उनको बानी छ । १५ हजार रुपैयाँ खर्चेर सानेपाबाट ल्याएको यो कुकुर आयुवलाई घरको सदस्यजस्तै लाग्छ । ‘दिउँसो उसलाई घरमा छाडेर काममा निस्किँदा निक्कै याद आउँछ । बेलुका घर फर्किंदा खानेकुरा लगिदिएपछि खुब खुसी हुन्छ,’ आयुवले पुगुबारे सुनाए ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर कुकुरप्रेमी छिन् । उनको घरमा एउटा मात्रै होइन, चारवटा कुकुर छन् । उनले एउटा नेपाली जातको र बाँकी जापनिज स्पिट्स पालेकी छिन् । कुकुर रुचाउनु, अझ धेरै नै कुकुर पाल्न रुचाउनुको कारण के हो त ? प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘दिनभर काममा व्यस्त भएर घर फर्किंदा थकान महसुस भइरहेको हुन्छ । तर, गेटभित्र छिर्दै गर्दा जब चारवटै कुकुर फुर्किंदै स्वागत गर्न आइपुग्छन् तब थकाइको दर कम हुन थाल्छ, यसकारण कुकुर पाल्दै आएकी छु ।’
बाहिरबाट घर फर्किंदा कुकुरका लागि सकेसम्म केही न केही खानेकुरा लैजान भुल्दिनन् करिश्मा । तर, कुनै दिन खानेकुरा छुटाउँदा पनि रिसाउँदैनन् उनका कुकुर । कहिलेकाहीँ नयाँ–नयाँ लुगा किनेर लगिदिँदा खुसीले नाच्छन् । ‘कुकुरका हरेक गतिविधिमा म आनन्द मानिरहेकी हुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘कुकुर साथमा नभए मलाई एक्लो महसुस हुन्छ ।’
कुकुरप्रेमी अभिनेत्री प्रियंका त कुकुरलाई नयाँ–नयाँ कपडा ल्याइदिँदै स्टाइलिस बनाइदिएर थाक्दिनन् । उनले चिहुवावा प्रजातिको सानो कुकुर पालेकी छिन् । दसैँमा टिका लगाइदिनेदेखि उसको जन्मदिन मनाउनेसम्म गर्छिन् प्रियंका । उनले आफ्नो कुकुरको नाम राखेकी छिन्, स्नोई । उनी पनि सम्भव भएसम्म नजिकको यात्रामा स्नोईलाई साथमै लैजान चाहन्छिन् ।
ड्रिम्स अभिनेत्री साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहसँग फ्रेन्च बुलडग छ । साम्राज्ञीको कुकुरप्रेम रहरलाग्दो देखिन्छ । सकेसम्म कुकुरसँगै रहन चाहन्छिन् उनी । घरबाहिर निस्किँदा पनि बुलडग आफ्नै गाडीमा राख्ने रहर गर्छिन् । साम्राज्ञीले उसैसँग सुतेका, खेलेका र यात्रा गरिरहेका तस्बिर खिचेर पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन् । उनले आफ्नो कुकुरको नाम ‘पोगो’ राखेकी छिन् । कुकुरबाहेक सम्राज्ञीलाई बिरालो पनि मन पर्छ । परेवासँग फोटो खिच्न पनि रुचाउ“छिन् उनी ।
गगन थापाका डाइहार्ड फ्यान : रामजी खाँडलाई टीकापुरकी युवतीकाे गालामा किस